Ahoana ny fampiasana ny data ho an'ny mpividy amin'ny tetikady ara-barotra amin'ny taona 2019 | Martech Zone
Toa tsy mampino izany, amin'ny taona 2019, orinasa maro no tsy mampiasa tahirin-kevitra hitarika ny hetsika varotra sy fivarotana azy ireo. Ny zava-misy izay vitsy dia vitsy no mihady izay lalina hahafantarana ny mety tsara indrindra dia mitarika anao sy ny orinasanao amin'ny tombony azo.
Androany, te-hijery lafiny maromaro amin'ny tahirin-kevitra ary inona no azony atao amin'ny paikady varotra sy marketing amin'ny ho avy. Hodinihinay izao rehetra izao:
Inona ny angon-drakitra Intent ary ahoana ny fomba anaovana azy
Ahoana ny fomba fiasan'ny angona fikasana
Fanitsiana sy fiaraha-miasa eo amin'ny marketing sy ny varotra
Inona no atao hoe angona angon-drakitra?
Loharanon'ny sary: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data
Amin'ny fehezan-teny tsotra indrindra, ny angona fikasana dia maneho rehefa manolotra fihetsika an-tserasera izay manantena hanana fividianana ny fahatsinjovana manokana. Izy io dia maneho amin'ny endrika roa miavaka: data anatiny sy data ivelany.
Ohatra roa mahazatra amin'ny angon-drakitra anatiny no
Fandraisana momba ny tranonkalanao: Ny olona manao fifandraisana dia mampita hevitra amin'ny faniriana hahafantatra bebe kokoa momba ny orinasa, ny serivisy sns.
Data momba ny mpanjifa eo an-toerana: Ny angona nangonina tamin'ny alàlan'ny mpanjifa eo an-toerana amin'ny alàlan'ny CRM na sehatra marketing hafa dia tena sarobidy tokoa rehefa manandrana mahatakatra ny finiavana. Ny angon-drakitra dia ampiasain'ny ekipa marketing mba hampifantohana ny saina amin'ny fitarihana izay manakaiky kokoa amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Ny angon-drakitra ivelany dia voangona amin'ny alàlan'ny mpamatsy antoko fahatelo ary mampiasa angona lehibe hanangonana vaovao izay fohy kokoa. Angonina amin'ny alàlan'ny cookies mizara ary karakaraina amin'ny haavon'ny IP. Ity angona ity dia vokatry ny fitsidihana an-tapitrisany amin'ny pejy manokana amin'ny tranokala an'aliny.
Ity karazana antontam-baovao ity dia manome fampahalalana manokana sy fohy momba ny refy tsy tambo isaina. Ireto misy ohatra vitsivitsy monja:
Ny isan'ny fotoana anaovana rakitra, rakitra, na fananana nomerika manokana
Ny isan'ny fotoana jerena horonan-tsary
Firy ny olona ni-click taorian'ny famakiana antso ho amin'ny hetsika eo amin'ny pejy fipetrahana
Statistikan'ny fikarohana Keyword
Ahoana no fanomezana loharanom-pahalalana amin'ny intent?
Loharanon'ny sary: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/
Ny angona angon-drakitra dia voangon'ireo mpivarotra manangona angona avy amin'ny tranokala B2B sy ireo mpanonta atiny, izay ao anatin'ny a mpiara-miasa amin'ny fizarana data. Azo antoka fa ny hevitra ny fahafantarana hoe inona ireo tranonkala notsidihin'ny olona manokana, ny teny tadiavin'izy ireo, ary ny marika ifandraisan'izy ireo dia mety ho somary mampivarahontsana eo aminy, saingy tsy misy afa-tsy izany. Angonina sy tahirizina ho an'ity tanjona ity ny data, avy eo zaraina amin'ireo matihanina mivarotra sy mivarotra (na amidy amin'ny). Ny orinasan-tsoratra, ohatra, dia liana manokana amin'ny orinasa (na, amin'ny tranga sasany, olona) izay miditra amin'ny teny fikarohana toy ny “serivisy fanoratana lahatsoratra”Na“ mpanoratra akademika ”ao anaty motera fikarohana lehibe ary mitsidika ireo tranonkala mivarotra ireo karazana serivisy ireo miaraka amina fikasana azo vidiana ihany koa.
Ny angon-drakitra dia natambatra sy notaterina isan-kerinandro tamin'ny ankamaroan'ny tranga. Amin'ny alàlan'ny fanangonam-bola amin'ny fikarohana an'arivony tapitrisa, fitsidihana tranokala, fisintomana, tsindry bokotra, fanovana ary fifampiraharahana, ny mpivarotra dia afaka manavaka ny fanjifana atiny sy mamantatra ny fiakarany.
Ity horonantsary avy amin'ny Bombora manazava tsara ny fizotrany:
Ahoana ny fomba fiasan'ny data intent?
Loharanon'ny sary: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/
Olona an-tapitrisany eran-tany no mampiasa Internet mba hikarohana lohahevitra an-tapitrisany sy minia mirotsaha amin'ny atiny manokana amin'ny Internet. Manapa-kevitra ianao hoe iza amin'ny antsipiriany no zava-dehibe indrindra ary manomboka manara-maso ireo fampifanarahana manokana mifanaraka amin'ny masontsivana voatondro. Ny mpivarotra dia manome ny antontra rehetra ny antonony, fa tsy ferana amin'ny:
Lohateny ho an'ny fanantenana tsara
Haben'ny orinasa sy ny toerana misy azy
Anarana sy URL an'ny kaonty mpanjifa efa misy
Anarana sy URL an'ny kaonty kendrena
Anarany sy URL an'ny mpifaninana mivantana
URL ho an'ny mpiorina indostrialy sy hetsika
Tanana ara-tsosialin'ny mpitaona indostrialy sy mpitarika eritreritra
Teny fitadiavana tsotra sy sarotra izay mifandraika amin'ny vokatra, serivisy, olana / teboka fanaintainana, ary vokatra azo / antenaina
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia natsangana ho algorithma izay mandinika sy manamarika ireo hetsika mifandraika amin'izany (ireo izay manondro fifampiraharahana tsy manam-paharoa amin'ireo fikarohana sy fidirana an-tapitrisany izay mitranga isan'andro). Ny angon-drakitra voaangona dia mitanisa antsipiriany momba ny fifandraisana, ao anatin'izany ny anarana voalohany sy farany, nomeraon-telefaona, adiresy mailaka, anaran'ny orinasa, lohatenin'ny prospect, toerana, indostria ary haben'ny orinasa. Izy io koa dia mampiseho tahirin-kevitra momba ny toe-javatra izay mamaritra ny hetsika nataon'izy ireo.
Ny ohatra amin'ny fihetsika voamarika dia ahitana ny fikarohana ankapobeny, ny fifaneraserana amin'ny tranonkala mpifaninana, ny fidiran'ny influencer indostrialy ary ny fangatahana mifandraika amin'ny hetsika indostrialy lehibe. Ny angon-drakitra koa dia manaparitaka hetsika amin'ny alàlan'ny karazany sy ny trigger. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mampiseho tsy ny zavatra nataon'ny vinavina na ny mpanjifa fotsiny, fa Nahoana izy no nanao an'io.
Azo atao aza ny manisy saina ny angona izay mamaritra ny mpanjifa ankehitriny, kaonty kendrena ary mamerimberina ny fisehoan'ny fikasana voaporofo. Izany rehetra izany dia midika hoe manana lisitry ny tena olona mandray andraikitra tena izy hahafantatra bebe kokoa momba ireo karazana vokatra sy serivisy amidinao koa.
Data angovo ho fitaovana fampifanarahana sy fiaraha-miasa
Ny marketing sy ny varotra dia nisy hatrany karazana fifandraisana feno fankahalana ny fitiavana. Ekipa mpivarotra dia mila mpitari-dalana mahay kokoa vonona hividy. Ny ekipa mpivarotra dia te-hahita fitarihana aloha, hampiditra azy ireo ary hikolokolo azy ireo mandra-pahatongany any amin'ny fahavononany.
Ireo zavatra rehetra ireo dia mampisondrotra ny valiny sy ny angon-drakitra fikasana tombony ho an'ny varotra sy ny marketing. Manome fitaovana fiaraha-miasa iraisana izay mampifandray mivantana ny varotra sy ny marketing, ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa, ny fandikana ny data ary ny fandaminana paikady mahomby ho an'ny karazana fifandraisana rehetra. Ireto misy ohatra mahazatra momba ny fampiasana fiaraha-miasa data:
Ny fahitana ny varotra mavitrika kokoa dia mitarika
Fampihenana ny churn ary mampiroborobo ny tsy fivadihan'ny mpanjifa
Fifandraisana mahomby amin'ny kaonty kendrena
Fampidirana aloha ny fanekena ny marika sy ny fametrahana ny sandany
Manaraka ny fironana mifandraika amin'izany
Ny tsirairay amin'ireo faritra voalaza etsy ambony ireo dia samy liana amin'ny marketing sy ny varotra. Ny fahombiazan'izy rehetra dia mampandroso ny orinasa ary mamela fiaraha-miasa mahomby sy misy dikany eo amin'ny ekipa.
Data entina: ny tombony mifaninana
Ny fampiasana angona data dia manana tombony maromaro. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny fahaizany manampy ny varotra sy ny mpiasan'ny varotra mikendry mpividy maromaro manerana ny fikambanana iray manontolo. Ny orinasa iray dia afaka, ary matetika dia, manana mihoatra ny iray tsena kendrena na persona ao ambanin'ny tafo iray. Ny zava-dehibe amin'ny mpanatanteraka na mpitondra iray dia mety - ary matetika dia - tsy mitovy amin'ny iray hafa.
Ny angon-drakitra iniana dia manampy ny mpivarotra hanamboatra atiny ho an'ny olona tsirairay tafiditra amin'ny fizotran'ny fividianana. Miaraka amin'ireo fikambanana an-jatony mampiasa fari-pitsipika mitovy amin'izany amin'ny fikarohana Internet, ny angona fikasana dia manampy amin'ny fitarihana ny famoronana atiny tena kendrena hananganana fanentanana matanjaka sy mahomby.
Mampiasà angona angona data
Ny fananana fifandraisana mivantana eo anelanelan'ny fikasan'ny mpividy sy ny atiny tany am-boalohany dia manome mpifaninana sy matihanina mpivarotra sehatra fifaninanana goavana. Mba hampitomboana ny angon-drakitra sy ny kalitaon'ny tahiry fikasana dia tsy ilaina ny fampifandraisan'ny angona angon-drakitra amin'ny karazana data, demografika, ary dataographic. Raha tsy misy ireo fifandraisana ireo dia sarotra (vakio: manakaiky ny tsy azo atao) ny mahatakatra tsara izay fihetsika manokana mifanaraka amin'ny mombamomba ny mpanjifa manokana.
Rehefa fahatakarana ny tanjon'ny manokana buyer persona napetraka, ny varotra sy ny varotra dia eo amin'ny toerana tsara kokoa hamoronana atiny ilaina sy ilaina izay mitarika amin'ny dingana tsirairay dia ny mpividy.
Iray amin'ireo fomba mora indrindra hampiasana ny angon-drakitra fikasana amin'ny fomba mandaitra ny fampivelarana ny atin'ny bilaogy, ny lahatsoratra amin'ny Internet, ary ny endrika atiny voasoratra hafa izay mampiseho fahatakarana mazava tsara ny tsenanao kendrena. Ny votoatiny dia tokony hiresaka olana sy teboka fanaintainana ampiarahina amin'ilay hita manokana tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra voaangona. Ny fanaovana an'ity rehetra ity dia mametraka ny marikao ho toy ny fahefana ary mampita ny fahafaha-manolotra atiny manan-tsaina, mendri-pitokisana ary azo itokisana.
Soso-kevitra tsara ihany koa ny hizara atiny am-boalohany amin'ny fomba izay manitatra ny tratra. Anisan'izany ny famolavolana paikady famoahana sy sindika manodidina ny atiny lasibatra rehetra. Raha fintinina, amboary ary apetraho ny atiny izay maneho taratra ny tanjon'ny fanantenana ary alao antoka fa mahita eo alohan'ny mpanatrika kendrena izany.
Drafitra fitarihana lohataona izay mampiasa tsara sy mampiasa data momba ny fikasana dia manome tombony azo antoka amin'ny hetsika varotra na marketing. Izy io dia mampiavaka ny marikao na dia amin'ireo mpifaninana lehibe aza ary mampitombo ny tsy fanekena anao ho mpitarika indostrialy.
Manamboara paikady marketing votoaty mivantana sy tsy misy taratra izay manome taratra ireo mari-pamantarana kendrena apetraky ny fanantenana mandritra ny karazana hetsika an-tserasera (karoka, fitsidihana tranonkala, fifampiraharahana amin'ireo mpifaninana, sns.). Tsy hanampy amin'ny fitarihana fitarihana tsara kokoa fotsiny izany fa hisy fiatraikany tsara amin'ny faran'ny farany ambany. Ny fampidirana angon-drakitra fikasana dia hanampy amin'ny fanatanterahana fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny ho avy, hahafahan'ny ekipa mpivarotra anao hifantoka bebe kokoa amin'ny kaonty mety hividy.
Tags: tany marketing
Ahoana ny fandefasana tranokala WordPress izay havaozina ho an'ny karoka